Abavelisi bemidlalo yeembaleki, abaThengi-Umzi mveliso waseTshayina
Idizayini yoSetyenziso lwakutshanje, I-Flyknitting Sck sneaker yamadoda aBekekileyo
Umphambili wentloko kunye nesitovu esinamagwebu aphezulu kunye ne-FlyKnit ephezulu kunika ukukhwela kamnandi. Ukuvalwa kweelaphu kukujikeleza kweendawo ezijikelezileyo zento ekufutshane. I-Bootie-style collar kunye nolwimi lubonelela ngentuthuzelo ejikeleze isithende sakho. Ukuvula ngokulula kunye nokukhupha iithebhu kwiikhola. Isusa insole. React midsole cushioning imelana noxinzelelo kwaye ibuyisela amandla onke amanqanaba isebenzisa izixhobo ezincinci zokuhamba ngendlela ephendula nangogudileyo ngexesha lokubaleka. Ukunyuka kwerabha kwindawo yokuphuma kunika i-traction kunye ne-durabilit ...
I-Amazon ephezulu umthengisi wesiko lamadoda amhlophe izicathulo i-sneaker eprintwe izicathulo ezimnyama zeezy yamadoda
Hlela kwinkqubo yesiqhelo yoqeqesho lwemihla ngemihla kunye nabaqeqeshi bomthambo wokuzilolonga. I-Mesh kunye ne-flyknit ephezulu kunye nephethini evaliweyo yokuphefumla. Ukuvalwa kwendabuko yendalo kunye nentambo yesitshixo esitshixekileyo ukugcina unyawo lonke lukhona ngexesha loqeqesho olunzima kunye neeseshoni ezisimahla zomzimba. Ulwimi oluxhonyiweyo kunye nekhola. Ukwakhiwa kwe-Bootie kunye nokudonsa ithebhu kwisithende ngokukhawuleza kunye nokulula ngokufanelekileyo kunye nokuziva. Umnatha ophefumlelweyo womyalezo kunye ne-insole evaliweyo. I-foam midsole ibonelela ngemvakalelo yendalo. I-Rubole Outole ene -ogo groove ...
I-2020 ishushu esithengisa isitayile Knit ephezulu yeemfashini I-Classic Brand yamadoda ezemidlalo izihlangu I-Yeezy izicathulo ze-Yeezy
Gijima umlenze emva kwethala lokuthuthuzela ngoncedo lwe-fleknitting sport shoe for men. UkuCushion: Ukukhanya okulula, impendulo eguquguqukayo. Ukuvalwa kweLace-up. Ikhola ethambileyo kunye nolwimi lunika intuthuzelo ejikeleze isithende sakho. Ukolula ulayini kunika imvakalelo efana-nesokisi. Isusa insole. React cushioning uxhathisa uxinzelelo kwaye ubuyisela amandla onke amanyathelo. Ishelufu yesithende ibonelela ngokuzinza njengokubaleka kwakho. I-Rubber Outole ibonelela ngethayile. Inqaku loLwazi lweMveliso uNo.
Izicoci eziThobekileyo zeSpanish ezithandekayo zeSports zaBesilisa nabasetyhini
Tsiba kwaye ujike ngendlela yakho ukuya kwindawo yomdlalo kunye nesihlangu esiphendulayo. Ibhalansi efanelekileyo phakathi kokusebenza okulula kunye nokuqina ngelixa i-outsole inikezela okokugqibela kunokunxiba okuphezulu. Iphiko le-flyknit eliguqukayo linikezela ngokufanelekileyo kwaye luziva. Ulwakhiwo lwe-bootee yolusu olungenamthungo ukuze kulunge ngakumbi kwaye kungenakuthelekiswa nanto. Ukuvalwa kweLace-up. Ilaphu elithandekayo elithandekayo. I-insole elungiselelwe amagwebu. Ubude obugcweleyo be-EVA bubodwa obubonelela ngokusisigxina, kunye nokukhanya okuqinileyo kunye nokomelela. Ulwazi ngeMveliso A ...
Izicwangcisi ezikwimidlalo yexabiso eliphantsi ezizihlangu ezigijimayo zasendle ezemidlalo
Kwizinto ezilula, ukusebenza kwenkundla okungekubonakalisi ukomelela okudingayo kuqeqesho olubanzi kunye nokhuphiswano. I-Knit sneakers ukudala indawo ephezulu yokuqina egcina ukukhanya, ukuphefumla ukusebenza. Ukuvalwa kweLace-up. Isilaphu esinokuphefumla. I-insole elungiselelwe amagwebu. Ubungakanani obugcweleyo be-polyurethane midsole inika isaphulelo kwakhona sokwenza amandla okuphendula ngokuphendula. I-Rubber Outole inikezela okona kuzinxiba okuphezulu. Inqaku loLwazi lweMveliso Nombolo: 5027 Igama lomveliso: ...
Ngama-2020 ama-bhanyabhanya amatsha embaleki, iibhutsi ezithengisa izihlangu ezemidlalo amadoda
Phinda ubhale kwilifa lakho emgceni okanye kwimihla ngemihla unxibe izihlangu ezitsha. Umanduleli: Inqaku le-legend. Uhlobo lwenkxaso: Abangathathi cala. UkuCushion: Ukukhanya okulula, impendulo eguquguqukayo. Umphezulu: Indlela. Ibunzi elibanzi kunye nokuphakama okuphezulu kunika uhambo olukhawulezayo. Ubunzima, i-mesh yokuphefumla ephezulu. Ukuvalwa kweLace-up. Ikhola edadayo kunye nolwimi lubonelela intuthuzelo ngeenxa zonke esithendeni sakho. Ukuvula ngokulula kunye nokukhupha iithebhu kwiikhola. Isusa insole. Iipilonon ezilula. Inqaku loLwazi lweMveliso Nombolo: 5028 Pr ...